Sangano reDzisvondo Pasi Rose Roshushikana neKushupika Kuri Kuita Vanhu muZimbabwe – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Munyori mukuru weWorld Council of Churches, Reverend Dr Olav Fykse Tveit, vati kuwondomoka kwehupfumi kunoshusha vedzisvondo pasi rose uye vaudza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa hupfumi kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo uye vachirarama zvakanaka.
Vachitaura nevatori venhu muHarare, Rev Tveit vati chikwata chavo, icho chine nhengo gumi nenhatu, chauuya kuzotsigira basa riri kuitwa nedzisvondo muZimbabwe zvikuru sei munyaya dzekurwirwa kodzero dzevanhu, dzidzo nezvimwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vatiwo rutsgiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vatiwo vafara chose kuti VaMnangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru pasarudzo zvikuru sei mukudzisisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisna mhirizhonga.
Rev Mtata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo uye VaMnangagwavatenda rutsigiro rwakapihwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita saPastor Evan Mawarire naPastor Patrick Mugadza, Rev Mtata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira chisati chabuda munyika.
← OPEN FIRE: Khupe Under Siege In Lupane
‘If democracy is expensive, dictatorship is seriously expensive …one cannot afford it’ →
July 14, 2017 c263afri 0